Mas’uuliyiinta Indonesia oo sheegay inay xoog uga saari doonaan dadka daggan goobtii volcanuhu ka qarxay – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiinta Indonesia ayaa sheegay in ay si xoog ah uga soo daad gureynayaan dadka ka agdhaw Buurta Agung ee Jasiirada Bali, halkaasoo Volcano ay ka qarxday.
Tobanaan qof ayaa ilaa hadda ku sugan Agagaarka Buurta Volcanuhu ka qaraxday sida uu sheegayo Stobo Boro Nugroho oo u hadlayay hay’adda ka hortagga Masiibooyinka Dabiiciga ah, isagoo intaas ku daray inay dad badan ka guureen goobta volcanuhu ka qarxey, inta ku hartayna ay si Xoog ah uga soo daad gurayn doonaan.
Garoonkii diyaaradaha iyo wadooyinkii kale ee loo mari jirey Gobalkan Dalxiiska ku wanaagsan ayaa gabi ahaanba la joojiyey.
In ka badan 100-kun oo qof ayuu noloshoodii saameeyey, iyagoo ka barakacay goobta uu ka qarxey volcanuhu, Ilaa haddana dad lagu qiyaasey 40 kun oo qof ayaa ku sugan goobta kuwaas oo Maamulka gobolkaasi bilaabay siduu u daad gurayn lahaa.
Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa kor u qaadday Heerarka feejignaanta ee heerka 4 aad 6:00 subaxnimo Maalintii isniinta markaasoo laga cabsi qabay inay ka dhacdo xaallad bini aadannimo.